Zvepabonde kushanya uye hupfambi: Ndedzipi nzvimbo dzakachengeteka?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Zvepabonde kushanya uye hupfambi: Ndedzipi nzvimbo dzakachengeteka?
Kuputsa Kufamba Nhau • Costa Rica Kupwanya Nhau • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • Japan Kuputsa Nhau • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • Singapore Kupwanya Nhau • Spain Kuputsa Nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau • Venezuela Kupwanya Nhau
Zvepabonde kushanya - iyo Erotic Museum
Vamwe vafambi vanoronga chaizvo kufamba kuzadzisa zvishuwo zvavo zvepabonde. Idaidze izororo rekuita bonde, kana uchida. Vanorota vachifara mukati red light matunhu uye tarisira kune erootic massage studio.
Iko hakuna chaicho chakakanganisika neicho chero bedzi mufambi achiteerera kukudzwa kwevashandi vebonde. Maonero evashandi vepabonde anofanira kunge ari ekuvapa rukudzo rwavo rwakakodzera. Uye vafambi vanofanirwa kurega chero kupi zvako kwekubiwa kwevanhu kana zviitiko zvinosanganisira vana mukushungurudzwa pabonde.
Izvo zvichitaurwa, ndedzipi nzvimbo dzakachengeteka kutora mukutenderera kwepabonde? Mune dzimwe nyika, indasitiri yebonde inonakidzwa nekuchengetedzwa kwemutemo wekutevedzera mutemo. Kuchengeta izvi mupfungwa uye kutsvaga zvakanakisa zvekushanya pabonde nzvimbo dzekufunga nezvadzo, heano gumi ekuisa pane izvo zvinyorwa:
Thailand ine mamwe maguta uko kushanya pabonde kunosimudzirwa zvisina kunangana. Aya maguta akazara nevanoita zvepabonde, sePattaya neBangkok Red Light Dunhu. Muchokwadi, Bangkok yakashongedzwa korona seyakakurumbira guta repabonde repasirese.
Ichokwadi kune yayo ine mukurumbira kuwanda kwekushanya kwepabonde, kwave kunzi vanoita bonde paradhiso. Kune vakadzi vane shungu dzekuchinjisa masevhisi avo kune hombe mari yemufambi. Izvi ndezvechokwadi zvekuti zvakachengeteka kutaura kuti kune anoshanda pabonde pese pese tsoka dzeBangkok.
Asi zviri pamutemo here? Chaizvoizvo, kwete. Kushanya pabonde kana hupfambi hazvitenderwe nemutemo wenyika. Izvozvi, zvakadaro, zviri pasi pekutonga kwemapurisa, uye hurumende inocherekedza indasitiri yebonde nekuda kwemamirioni emadhora muhomwe kuGDP yenyika.
MuSingapore, kuita bonde zviri pamutemo sezviri pamutemo uye kunodzorwa nemutemo, asi zviitiko zvisina kunaka zvine chekuita nehure zvinoita kuti zviongororwe nemapurisa. Nekuda kweizvi, kuita bonde uye kubhadhara kwaro kunowanzoitwa kuseri kwemikova yakavharwa.
Kunyange chipfambi chingave chepamutemo, pimping uye brothel hazvisi. Mapurisa akajairwa kuvhara maziso - ichi chinoita kunge chinhu chinozivikanwa muindasitiri yebonde zvisinei nenyika - asi dzimba dzebonde dzakakurumbira dzinofanira kutarisa zvakanyanya kuti dzive nechokwadi chekuti hapana chiitiko chematsotsi panzvimbo yacho.
Singapore inyika iyo inopa rusununguko rwekuti pfambi iite bhizinesi rayo iri yega mumba mayo kana imba munzvimbo dzinozivikanwa dzakadai seGeylang Road, Orchard, Decker Road, uye Keong Saik Red Light District. Ivo zvakare vanogona kuzviita munzvimbo dzakabhadharwa navo kana muhotera yevatengi.
Mahure anofanirwa kuongororwa zvekurapa kuti aone maSTD uye anofanirwa kutakura gwaro rinoratidza kuti havasi vatakuri vezvirwere zvepabonde.
Iyo Dominican Republic ihofori mukushanya kwepabonde, uye hongu, zviri pamutemo uye zvinouya pasi pekudzivirirwa kwemitemo. Asi seSingapore, munhu haakwanise kumhanyisa brothel kuti awane mari kubva kune vanoita zvepabonde kana kuburikidza neumwe wechitatu. Mushandi wepabonde anofanira kuwana mari ari oga.
MuDR, vanoita bonde vanogona kuve vashandi vega kana vachida kuzviita. Uye zvakare kune mukana wekupinda mune bhizinesi rekutengesa bhizinesi munzvimbo inozivikanwa senzvimbo dzepamusoro.
MuUkraine, Kiev neOdessa zvinozivikanwa semaguta anonyanya kufarirwa pabonde munyika. Zvepabonde kushanya hakuna kutenderwa pano, asi hapana mukana wakawanda wekukanganiswa nemutemo. Aya maguta maviri ane akabvarura makirabhu uye maseru parlors ari kutenderera kwese kwese nzvimbo.
Vanofamba pabonde kuenda kuUkraine vanozviita tsika yekusarasikirwa nekushanyira Kiev neOdessa uko kwavanogona kuzadzisa zvishuwo zvavo zvepabonde nerubatsiro rweUkranian vakadzi nevarume.
Dunhu rinozivikanwa redhivi muJapan ndiyo migwagwa yeRoppongi muTokyo. Asi pane kubata kwekufamba bonde munyika ino.
Ipo Japan ichifarira huwandu hukuru hwevashanyi vekunze, vakadzi vanoita zvepabonde havanyatsoda varume vekunze. Vakadzi vechiJapane vanowanzo davira kuti mhando yebonde inodiwa nevarume vekunze ine hukasha uye kwavari izvi hazvidiwe.
Pamwe chete neizvozvo, ivo havadi munhuwi wemuviri wevatorwa uye vanowana chinodzivirira mutauro chidziviso kubva pakuzvibatanidza pachavo kugutsa zvinodiwa nevatengi pabonde.
Wanga uchiziva here kuti gumi muzana revose vanoenda kuCosta Rica vari kuenda ikoko pabonde? Chii chinoita kuti nyika ive yakakurumbira? Iko mitengo yakanaka here? Vashandi chete vane hunyanzvi here?
Zvakanaka, pamwe, asi zvakanyanya imo nekuti muUnited States of America, hupfambi haubvumirwe, uye Costa Rica haisi kure zvakadaro.
Muchokwadi, vazhinji vanoenda kuUS vanoenda kune hupfambi muCosta Rica kusvika kune vangangoita makumi masere muzana.
MuVenezuela, vakadzi vane hunhu hunonyanya kukosha hunovaita iwo summation yemhando chaiyo yerunako yakambowanikwa pasi pano. Izvi ndezvechokwadi nenhamba yevakadzi veVenzuelan vakawana zita reMiss World.
Pano, chipfambi chiri pamutemo, uye kuita bonde chinhu chakajairika, kunyanya muCaracas. Iri guta rinobhururuka nemasevhisi ekuperekedza kune vanofara vevashanyi vebonde.
Ma brothels aripano uye erootic massage parlors uye massage massage spas.
Spain ine zvese zvaingataure - waini, kurwa nenzombe, uye chipfambi chepamutemo. Matunhu matsvuku emagetsi muSpain akawanda uye anoshanda.
Uye kunyangwe mutaundi umo musina redunhu redunhu, mufambi wepabonde angangowana hure rakagadzirira kuendesa masevhisi avo nemari yakanaka.
Indonesia ine mukurumbira wakashata wekubiridzira vana pabonde, saka vafambi vepabonde vanorayirwa kuti vachenjerere nezvekwavanowana zviitiko zvepabonde.
Zvichida nzira yakachengeteka yekuwana bonde muIndonesia ndeyekushandisa iyo Internet. Kune zvindori zvechipfambi uye maforamu ehupfambi ayo mufambi wezvepabonde anogona kuwana kuburikidza nesocial media.
MuGili neBali, kushanya pabonde hakuna kutaurwa zviri pamutemo - hazvisi pamutemo - saka chenjedzo.
Iye zvino Amsterdam inozivikanwa zvikuru neRed Light District. Pano, chipfambi chiri pamutemo zvachose uye chakachengeteka. Ivo vanotova nechikamu chewebsite yavo yakatsaurirwa kuRed Light District.
Mumwe anogona kana kuenda kunotenga mumawindo uri munhu nekungofamba-famba kupfuura mahure uye nekutarisa pfambi mumahwindo.
Kune zvakare kuvapo kwenzvimbo yekuchengetedza bonde uko vafambi vepabonde vanogona kudzidza zvimwe zvinhu zvitsva nezve zvinofadza zvenyama zvinosanganisira rudo rwepanyama.